Archive du 20191029
Famatsiana solika nikorontana Nosaziana ny LPSA, Total ary ny Shell
Miakatra amina antanantohatra hafa mihitsy ny krizin-tsolika ankehitriny.
Fanomanana ny fifidianana Tonga ny ampahan`ireo fitaovana avy any Afrika atsimo
Mizotra tsimoramora ny fanomanana ny fifidianana kaominaly sy monisipaly.
Rina Randriamasinoro Nihaona tamin’ireo zanaky ny faritra monina eto Iarivo
Nihaona tamin'ireo tanora avy any amin'ny faritra ka monina eto Antananarivo eto teny amin’ny Live Hotel ny kandidan’ny TIM Rina
Antenimieram-pirenena Handinika ny ady amin’ ny tsimatimanota
Teboka roa goavam-be ho an’ ireo solombavambaoaka no tsy maintsy hodinihana eny anivon’ ny Antenimieram-pirenenaamin’ ity herinandro ity. Voalohany, ny fandiniihana ireo mpikambana eo anivon’ ny Fitsarana avo na “Haute Cour de Justice”.
Fifidianana ben’ny tanàna Tsara toerana i Tody Arnaud ao Toamasina I, hoy i Riribe
Sefom-pokontany 49 no nesorin’ny prefe Atsinanana, satria nolazaina fa tsy mahafaly ny tsy fandriampahalemana, “hono”, izy ireo.
Andriamahefa Razanadrakoto Hamaly babena ny tanàna sy ireo mponin’Ambohitrimanjaka
Miisa fito ireo kandida hifaninana ho Ben’ny tanàna ao anatin’ny kaominina Ambohitrimanjaka. Andriamahefa Razanadrakoto mirotsaka amin’ny anaran’ny MAHEFA na manadratra ny hery ho
Fitantanana tsy mangaraharaha Tototry ny tsikera ny governemanta
Mandray ny andraikiny mitandrifyazy ve ireo nomem-pahefana tsirairay ?
Sefom-pokontany Mazava ny lalàna : fidiana fa tsy tendrena
Ny fokontany no rafitra voalohany eny ifotony ary mahalala tsara ny marary amin`ny vahoaka ao aminy.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Olana ny tsy fahampian’ny fampiofanana
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ireo mpianatra miisa 25 eo anivon’ny CEDS (Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques).
“Foot à 7 Gégé Bosco” teny Saropody Raikitra ny fitiliana taninketsan’ny baolina kitra
Nanomboka tamin’ny alahady 27 oktobra tolakandro teo ka haharitra hatramin'ny faha-24 novambra 2019 izao ny fifaninanana “Foot à 7 Gégé Bosco”
Hoy ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka izay hoe : “mora manadino anie ny Malagasy e ! “ .
KRIZY Efa miantraika anaty vilany
Tsy lainga fa efa tena miantraika hatrany anaty vilany mihitsy ny krizy lalovan’ny firenena ankehitriny.
Jean Nirina HAFARI Hatao fanadihadiana eny amin’ny Bianco anio
Raha noheverina fa efa nangina ilay raharaha kianjan’Anosizato nampiditra am-ponja ny filoha nasionalin’ny HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina volana vitsivitsy lasa izay, dia nihetsika indray izany.
Olana eny anivon’ny EPP Andraikitry ny FEFI, hoy ny sefo Cisco Antananarivo Renivohitra
Nitondra fanazavana mikasika ny olana mitranga eny anivon’ireo EPP maro samihafa eto amin’ny
Zon’ny olona manana fahasembanana Hiady ho amin’ny fandrafetana azy i Madagasikara
Nivory tao Johannesbourg Afrika Atsimo nanomboka ny 26 septambra lasa teo ka hatramin’ny 02 novambra 2019 ho avy izao ny firenena avy aty amin’ny ilany atsimon’i Afrika sady mpikambana ao amin’ny SADC.
Fampidirana hetra Tsy tratra ny tanjona ny taona 2019
Mandritra ny 2 andro ny seminera iarahana amin’ny CREDAF na ny Cercle de Reflexion et d’Echange des Dirigeants des Administrations Fiscales izay nanomboka omaly teny amin’ny Hotely Colbert
Fahaiza-mitantana Mibosesika mankany Etiopia ireo mpamatsy vola
Na dia nahita fihenana aza ny fitomboan’ny harin-karena noho ny main-tany teo anelanelan` ny taona 2015 sy 2017, miverina amin` ny laoniny indray izany ao Etiopia.